Himalaya Dainik » किन बोल्दैनन् सुष्मा र पूजा ? यस्तो छ कारण
नायिका पुजा शर्मा र सुष्मा कार्की बिचको बिवादले निकै लामो समयदेखि चर्चामा पाइरहेको छ । पछिल्लो समय त झनै उनिहरूको बिषयले निकै चर्चामा पाउने गर्छ ।
यसमा केहि पुरानो प्रसंग जोडाैँ- अभिनेत्रीहरु झरना थापा, नीता ढुंगाना, रेखा थापा, पूजा शर्मा, श्वेता खड्का क्रमशः लस्करै बसेका थिए । पछाडिबाट आइपुगिन्, सुष्मा कार्की ।
पालैपालो पछाडिबाटै झरना, नीता र रेखासँग उनले हात मिलाइन्, त्यसपछि अंकमाल गरिन् । जब पूजाको पालो आयो, उनी थोरै पछाडि फर्किएर पूजालाई इग्नोर गरिन् । एकैचोटी श्वेतासँग अंकमाल गरिन् । रेखाले सुष्माको हात समातेर पूजासँग मिलाउन खोजिन् । तर सुष्मा झर्किँदै पर लागिन् । यो भिडियो त्यो समय निकै भाइरलसमेत बन्यो ।
यो घटना दुइ बर्ष पहिला काठमाडौंस्थित मध्यबानेश्वरको डाइनिङ पार्क रेष्टुरेन्टमा ‘रमाइलो छ’ ले आयोजना गरेको एनिभर्सरीमा देखिएको दृश्य हो । त्यसपछि पनि उनिहरूको बिवाद टेलिभिजन कार्यक्रमदेखि सामाजिक संजालमा धेरैपटक छताछुल्ल नै भइसकेको छ ।
तरपनि धेरैलाई उत्सुकता छ– पूजा र सुष्मा के–कारण बोल्दैनन् ? सुष्मा किन पूजासँग चिढिन्छिन् ?लामो समयदेखि चर्चा छ, यसको एउटै कारण हुन– निर्देशक सुदर्शन थापा ।
किनभने कुनैबेला सुदर्शन सुष्माको प्रेमी थिए, अहिले उनी पूजासँग निकट छन् । सुष्मासँग ब्रेकअप भएपछि पूजा र सुदर्शन अफेयरमा रहेको चर्चा फिल्मवृत्तमा चलिरहेको छ । यसकारण नै सुष्मा र पुजा बिच फाटो परेको बताइन्छ ।
यता पूजा र सुदर्शनको प्रेम पनि दुवैले स्वीकारेको अवस्था भने छैन । दुवै यसलाई मित्रतामात्रै भनिरहेका छन् । तर लगातार सुदर्शनको फिल्मसँग पूजा जोडिरहेकी छिन् । उनिहरू सँगे मिलेर फिल्म समेत बनाएका छन् । प्राय उनिहरू छुट्टिदेनन् पनि । जसले शंका गर्ने ठाउँ भने दिइरहेको छ ।